Alibangisa eYurophu ekhangayo ezizwela yethu. Ngenxa Schengen visa, bakwazi ukuhambela amazwe amaningana EU futhi uthole uhambo lwabo inombolo eliphezulu lemibono. Amazwe athandwa kakhulu travel, amaRashiya kukhona Czech Republic futhi eJalimane, futhi imigwaqo oyisilomo umzila wasePrague eMunich. Ngakho sanquma ukuhlola zonke izindlela ezingakhona yezokuthutha, efanelekayo izivakashi e-Europe kuphela.
Ibanga kusukela ePrague Munich
umzila ngamunye iqala sokunquma ibanga phakathi kwezindawo ezimbili. Bangaki wasePrague eMunich amakhilomitha? Esimweni sethu, labo le nkinga sicacile futhi ayidingi Ukutadisha ngokucophelela. La masheya amabili amahle idolobha amathathu namashumi kuphela futhi amakhilomitha ayisishiyagalombili.
Ngisho lokhu ibanga incane kakhulu eYurophu, futhi yini esingayisho ngesimo abaseRussia, asetshenziswa ngubani ukuba banqobe amabanga okukhulu. Phela, izwe lethu liyaziwa expanses yayo enkulu.
EPrague - Munich: kanjani ukuba uthole
Uma ngokunembile futhi ngokuqondile wanquma ukuvakashela kokubili emadolobheni ngesikhathi esisodwa, khona-ke ungakwazi ukuqonda - kanzima ukuba bangakhutshwa kwi amakhona emangalisayo ezinjalo eYurophu, egcwele umlando ulwandle ezikhexisayo. Ngicabanga izivakashi eziningi kangaka, ngakho umzila ePrague - Munich is kahle zibekwe futhi ephapheme kakhulu.
Abavakashi babe izindlela eziningana ukuze uthole indawo oyifunayo:
Ngamunye izinketho has ubuhle nobubi bayo, ngakho sizoxoxa ngokuningiliziwe.
Indlela elula ukusuka ePrague eMunich - kuba ukuthenga uhambo ukuze usuku olulodwa noma ezimbili. Iqiniso lokuthi e Prague izinkambo ezinjalo athandwa kakhulu phakathi izivakashi eziningi.
Uzenzela, wena ke eliqhutshwa endaweni bazinza ehhotela siyokondliwa, sizobonisa zonke izinto futhi ekupheleni ukuvakasha ukubuyela emuva ePrague. Akhubeke uthola ezinye imizwelo eyakhayo, futhi lutho izingozi. Ngaphezu kwalokho, e-dolobha Czech iyasebenza inqwaba iziqondiso abakhuluma isiRashiya, ukuze izinsuku zakho zibe ukujabulela ngokugcwele uhambo ezikhangayo Munich sika.
Kungcono uma uhambo enjalo ihlala izinsuku ezimbili. Lokhu kuzokuvumela ukuba ahambele wonke amasayithi ngisho sithathe izinto eziyizikhumbuzo abangane nezihlobo. Izindleko uyintokozo ezinjalo ukuba cishe ayikhulu namashumi amathathu euro umuntu ngamunye. Intengo kuhlanganisa ukudlulisela, iminyuziyamu isikhumbuzo amasayithi, ihhotela yokuhlala kanye nokudla.
Indlela esheshayo ukwenza uhambo wasePrague eMunich - Yebo, zendiza. Kodwa-ke Kuyaphawuleka ukuthi le ndlela akuyona ethandwa kakhulu ngenxa yezindleko zayo okusezingeni eliphezulu. Akuwona wonke izivakashi abakwaziyo ukuthenga ithikithi lendiza eMunich.
Nakuba emoyeni akuyona imizuzu engaphezu kwamashumi amahlanu, kodwa izindleko indiza ilingana 250 euro. Ngokuvamile, izindiza ngqo kukhona Lufthansa. Uma intengo enjalo ucabanga nehaba kakhulu, bese ngibheka imizila nge ukudluliselwa. Le ndiza kuyokulahlekisela yisilinganiso sesifundo esisodwa namashumi amahlanu euro. Nokho, kulesi simo, uhambo kuzothatha phakathi amahora amane eziyishumi. Ngokusho leliqhinga, emoyeni abathwali elandelayo usebenze:
Amathikithi indiza zokuthutha umphakathi angathengwa ku-intanethi noma ehhovisi ithikithi ekwakheni ePrague Airport.
Uma ungeyena entsha ukuhamba e-Europe, uyazi ukuthi nojantshi kukhona ethandwa kakhulu. Cishe wonke amaphuzu e-European Union axhunyiwe kahle nomunye, okuyinto kusiza kakhulu ukuphila izivakashi.
Izincwajana zemininingwane wasePrague eMunich wathumela kane ngosuku. Kuyinto uhlelo ngempela elula, izivakashi zingathola ukuhlela uhambo ukuze eMunich ekuseni noma, kunalokho, ukuze uhamba ekuseni, uma uhlela ukuhlala Bavaria kwezinsuku ezimbalwa.
Endleleni uzochitha amahora ayisithupha, futhi izindleko ithikithi we ekilasini lesibili kuyoba mayelana ayisikhombisa euro.
Ibhajethi izivakashi ngokuvamile ekhetha isevisi ibhasi ophakathi kwamadolobha. Kuyaphawuleka ukuthi le ndlela ikhambo futhi zithandwa kakhulu. amabhasi European ukhululekile, futhi bachitha amahora ambalwa kuzo ngeke kube nobunzima.
Umzila oya Munich wakhonza yizinkampani ezintathu ezaziwayo:
Ngamunye has isheduli ayo ekahle lokhu noma lokhuya isigaba abagibeli.
Ngokwesibonelo, Deutsche Bahn - kuyinto ibhasi nsuku zonke. Bona unqobe umzila amahora amane kubiza le njabulo euro amabili nanhlanu kuphela. E Prague, ungathatha ibhasi kusukela sesitimela esikhulu, futhi e Munich, wena bayokhululwa esiteshini Central.
StudentAgency kwenza ebusuku izindiza, intengo ithikithi ingeqi euro amabili nesikhombisa. E Munich, uzoba mayelana lesihlanu ekuseni.
Eurolines amabhasi asuke ku Munich kabili ngosuku - ekuseni nakusihlwa. Intengo Ticket uyahluka euro amabili nanhlanu. Bus isuka esiteshini "Florenc" bese befinyelela Central Station Munich.
EPrague - Munich ngemoto
Uma uzimisele ukuqasha imoto futhi ujabulele ubuhle ezizungezile, kanye ukuhlela ukuphambuka kwenzeke umzila, udinga ukukhetha ukuhamba ngemoto
Uma ungakwazi ushiye ePrague ngemva kwe-iri lobunane ekuseni ke amahora amahlanu unqobe umgwaqo ePrague - Munich. Ibanga ngemoto Kungase kuthathe isikhathi esijana futhi, uma ungene amashubhu Fluorescent, futhi kule ndawo ivamile impela.
Yiqiniso, isinqumo kuhlale ngu isihambi. Phela, nguye kuphela ukwazi ukuthi isikhathi esiningi nemali abazimisele ukuchitha sendleleni. Nokho kafushane fingqa zonke lezi zindlela osekukhulunywe esingakwazi ngayo. Uma ungeyena bazizwa beqiniseka kakhulu kwelinye izwe, khona-ke ephelele ukubona uhambo. Esimweni lapho esibalulekile isikhathi, hhayi imali, ukukhetha indiza. umzila ngqo kungaba laba bantu abamatasa ngampela ingu a godsend.
Uhlobo oluvame kakhulu i zokuthutha kubhekwe njengento ibhasi nesitimela. Konke kuncike izintandokazi zezivakashi, nakuba kancane ezibizayo izitimela ngamabhasi. Nokho, kuyinto izinkampani ukhululekile futhi omkhulu kangaka noma imindeni enezingane singathanda ukweluleka igama lakhe.
Ekugcineni, imoto. Kungaba umthombo wenjabulo noma izinkinga. Konke kuncike kwemizwa isihambi namakhono akhe ukushayela. Ngakolunye uhlangothi, line ifakwe endaweni enhle ukuhlala, lapho ungakwazi aphuze inkomishi yekhofi kanye yokwelula izinyawo zakho. Futhi endleleni kukhona emizaneni eminingi kancane wekugcina, lapho ukubheka nice. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, kungase kudingeke uzulazule kumephu bese udweba umzila. Futhi ugcwalise imoto bese ukhokha izigaba okhokhelwayo umzila. Uma usukulungele konke lokhu, kufanele ukhethe travel imoto.
Futhi, ngempela, akunandaba okuyinto indlela nginqobe lezi amakhilomitha amathathu namashumi ayisishiyagalombili, into esemqoka - kungcono okubona ngamehlo akho lamadolobha amahle kakhulu eYurophu.
Igumbi fun Hersonissos Crete
Penimaster Pro - cleaner extender ngoba umthondo ukukhulisa. Indlela yokusebenzisa? Izibuyekezo futhi Ezenye